Mora mianatra tenisy
A. Tennis dia nivoatra mandraka androany ary lasa fanatanjahantena faharoa lehibe indrindra manerantany. Tamin'ny taona 1970, noho ny fampidirana tenisy fohy dia nandroso tokoa ny taonan'ny fianarana tenisy. Azonao atao ny manomboka mianatra milalao amin'ny faha-telo taonany. Amin'izao fotoana izao koa dia manana karazana mpanazatra baolina tenisy ...
Siboasi ao amin'ny fampirantiana indostrian'ny indostrian'ny fanatanjahantena iraisam-pirenena Wuhan faha-3
Nanomboka tamin'ny faha-15 ka hatramin'ny faha-17 Oktobra, tontosa soa aman-tsara tao amin'ny Hubei Wuhan International Convention and Exhibition Center (Hankou Wuzhan) ny 3 Wuhan International Sports Industry Expo. Nahasarika marika fampirantiana maherin'ny 400 ny fampirantiana avy any an-toerana sy any ivelany, ary ireo mpaninjara matihanina. Mihoatra ny ...
Semifinalin'ny basikety vehivavy olimpika: basikety vehivavy amerikana no mpanjaka
Tamin'ny 12:40 atoandro tamin'ny 6 Aogositra, fotoana tao Beijing, nanomboka ny lalao famaranana basikety ho an'ny vehivavy Olaimpika. Ny ekipa mpilalao basikety amerikana mpiaro tena dia niatrika ny ekipa basikety vehivavy Serba. Ny ekipa basikety vehivavy amerikana no laharana voalohany. Ny Tokyo Oly ...
Miarahaba an'i Siboasi sy ny fikambanan'ny tenisy any China nahatratra fiaraha-miasa stratejika
Tamin'ny volana aprily 2019, Siboasi sy ny fikambanan'ny tenisy sinoa dia nahatratra ny tetikady fiaraha-miasa stratejika hampiroboroboana ny fampandrosoana iraisana eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny tenisy an'ny roa tonta. Aorian'ity fiaraha-miasa ity dia hiara-hiasa amin'ny Fikambanan'ny Tenisy Sina amin'ny milina fanofanana baolina kitra / equi i Siboasi ...
Marika samy hafa ho an'ny milina fitifirana Tenisy
Ho an'ireo mpilalao tenisy, ahoana ny fomba hisafidianana marika milina baolina tenisy tsara hampiasaina? Ny milina tenisy tsara dia mpiara-miasa tsara indrindra mandritra ny 10 taona farafahakeliny. Ho an'ny mpanjifa, angamba ny ankamaroan'izy ireo dia mijery ny vidiny aloha, fa mividy milina fanofanana tenisy amin'ny fampiasana taona maro, mijery fotsiny ...
Ho lasa fangatahana henjana ny vokatra fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy
Ny fanabeazana miorina amin'ny fanadinana dia nalaza tany Sina nandritra ny fotoana ela. Eo ambanin'ny fitaomana ny foto-kevitra nentin-drazana ny "fahalalana manova ny lahatra", ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny dia manantitrantitra ny fanabeazana ara-tsaina noho ny fanabeazana ara-batana. Amin'ny fotoana maharitra, ny olan'ny tanora tsy fahampian'ny fanatanjahan-tena sy ny ove ...
Mividy milina baolina tenisy afaka manampy ny fahaiza-manao tenisy?
Ireo mpilalao tenisy dia hieritreritra foana ny fomba hanatsarana ny fahaizany. Ny milina fanofanana tenisy no mpiara-miofana tsara indrindra ho azy ireo hamahana ity olana ity. Mampiseho tombony vitsivitsy izahay amin'ny fampiasana milina baolina tenisy etsy ambany ho an'ny ref. Tombony amin'ny fampiasana milina baolina tenisy: 1. Mandraisa anjara ...
Nandray anjara tamin'ny Seminarà manara-penitra ny Tenisy kely an'ny Fikambanan'ny Tenisy Sinoa miditra ao amin'ny Campus
Nanomboka tamin'ny 16 Jolay ka hatramin'ny 18 Jolay, ny seminera kelin'ny fikambanan'ny Tennis China dia niditra tao amin'ny seminera fanamarinana ny campus izay nokarakarain'ny China Tennis Association Tanis Sports Development Center dia natao tao Yantai, Faritanin'i Shandong. Wan Hou, filohan'ny Siboasi Andriamatoa Quan no nitarika ny mpikambana tamin'ny fikarohana ...
Raha mitady hividy milina fanatanjahan-tena baskety ianao na manao orinasa ho azy dia tonga amin'ny toerana mety ianao, izahay no mpanamboatra matihanina amin'ny famokarana sy fivarotana milina fanatanjahan-tena mampihetsi-po amin'ny basikety efa an-taonany maro. Amin'ny fiofanana amin'ny tsenan'ny milina basikety ...
Inona no marika atoro anao indrindra amin'ny milina baolina tenisy?
Misy marika samy hafa eny an-tsena ho an'ny milina fanaovana fanatanjahan-tena tenisy, samy manana ny tombony azony avy ny marika tsirairay, tsy afaka milaza hoe iza no ratsy, iza no tsara indrindra, nefa afaka milaza raha toa ka mahafeno ny filanao io, dia ny marika no tsara indrindra aminao. Androany eto dia manoro anao ny marika SIBOASI ho an'ny tennis automati ...
Masinina fanofanana tenisy manan-tsaina amin'ny tenisy campus
Tenisy dia fanatanjahantena mampifangaro ny hakantony, ny lamaody ary ny fahasalamana. Izy io dia tsy vitan'ny fanamafisana ny vatana fotsiny, fa ny rivo-piainany ara-kolotsaina amin'ny fomba sivilizasiona, fahalalam-pomba ary ny fomba malefaka ihany koa dia mamolavola ireo foto-kevitra ara-panatanjahantena tsara ananan'ny olona mandray anjara amin'ity fanatanjahantena ity matetika, eny fa na ny ideol ...
Ny tombony azo amin'ny milina fampiofanana basikety SIBOASI
Ny tombony lehibe azo avy amin'ny milina fanaovana basikety marika Siboasi raha oharina amin'ny milina fanondranana basikety marika ivelany: Voalohany, te hampahafantatra momba ny orinasa Siboasi aminao: Siboasi dia natsangana tamin'ny taona 2006, any DongGuan, GuangDong, Sina, mamokatra sy mivarotra milina toa an'i Tenni. ..